တစ်နိုင်ငံလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ လှိမ့်ဝင်တည်သုံး ယတြာ အကြောင်း – ရွှေလရောင်
“အေးလိုက်တာ” လို့ အသံတိုးတိုးလေးတွေနဲ့ညည်းကြတယ်
ကျွန်မ အိမ်ထောင်ကျပြီးတည်းက ပိုက်ဆံဘယ်ကရလည်းဆိုရင် ကျွန်မအမျိုးသားဆီကပါပဲ။ ကျွန်မပိုက်ဆံမရှာပါဘူး။
slyadmin June 15, 2018
ကျမ ရောင်းတဲ့ “လှိမ့်ဝင် တည်သုံး” အဆောင်အကြောင်း ဗဟုသုတအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးစိတ်ဝင် စားနေကြတဲ့ လှိမ့်ဝင်တည်သုံးယတြာက ကျွန်တော်စ ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ ။ အဖြစ်က ဒီလိုပါ ။
သူ့လုပ်ငန်းက တအားလှိမ့်ဝင်သွားတာကို……… အဲ့… သူ့အိမ်ရှေ့အဝင် ဝ မှာ လှိမ့်ဝင် စဉ့်အရုပ်လေးကို အိမ်ဘက် လှိမ့်ဝင်နေတဲ့ ပုံချိတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ် အိမ်ဧည့်ခန်းမှာတော့ စဥ့်အိုးလေးတည်နေတဲ့ပုံကို တင်ထားတာေ တွ့ရ ပါတယ်…… မေးကြည့်တော့ လှိမ့် ဝင် တည် သုံးလေတဲ့…… စီးပွားဖြစ်တယ် လုပ်ငန်းကောင်းတယ်တဲ့ဗျာ……
၂။ ကျွန်တော်တို့ မြို့မှာ ထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင် ရှိတယ်… အရမ်းကိုရောင်းရတယ်…… အလှူပေးနေသလိုကိုရော င်းရတာ …သူတို့အိမ်မှာလည်း အိမ်ရှေ့သံတံခါး အုတ်ခုံမှာ အဲဒီ လှိမ့်ဝင် အရုပ်လေး အိမ်ဘက်ကို လှိမ့်ဝင်နေတဲ့ ပုံလေး တင် ထားတာတွေ့ရပါတယ်…သူ့ထမင်းဆိုင်ကတော့ လူတွေ လှိမ့်ဝင်နေတော့တာပါပဲဗျာ……
၃။ အဲ ဒါနဲ့ လူမဝင် လုပ်ငန်းမကောင်းတဲ့ သူနဲ့ အကြွေးတင်နေတဲ့မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် နှစ်ယောက်ကို အဲဒီ အရု ပ်လေး နှစ်ခုကို ထားဖို့ ပြောလိုက်တာ သူတို့လည်း ကျောက်ဆည် တပေါင်းပွဲနဲ့ကြုံတော့ စဥ့်ကူးက စဉ်အိုးသည်တွေ လာတာနဲ့ အဲဒီ အရုပ်လေးကို တစ်ရုပ်ကို အိမ်ရှေမှာထားပြီး တစ်ရုပ်ကို အိမ်ထဲမှာထားဖို့ ပြောလိုက်တာ အဲဒီ ၃ယော က်ဟာ ၆လအတွင်း လုံးဝ မဆပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ အကြွေးတွေ ကြေပြီး အဆင်ပြေ သူတွေဖြစ်နေ ပါပြီဗျာ ………
အဲဒါနဲ့ ပြင်ဦးလွင်က ဗေဒင် ဆရာ ဆရာဝင်းမော်အောင် အိမ်လာတော့ အဲဒီ ယတြာအကြောင်းပြောပြလိုက်တာ သူလ ည်း သဘောကျပြီး အဲဒါကို အားလုံး သိအောင် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တင်ပေးပါ လို့ ပြောလို့ တင်ပေးရာကနေ လှိမ့်ဝင်တည်သုံး အိုးသည်တွေ ရောင်းမလောက် ဖြစ်ကုန်တော့ တာပါပဲ ဗျာ ။
”လှိမ့်ဝင် တည်သုံး ” စဥ့်အိုးလေးတွေ ဘယ်လို ဓာတ်ဆင်ရတာပါလဲ အဲဒီလှိမ့်ဝင် တည်သုံး အရုပ်လေးတွေ က ဟို အရင် လောကီပညာရှင် (ဆန်းပညာရှင်) တွေ လုပ်သွားခဲ့တာပါ ။ ပညှပ်သွားရာ ဓါတ်သက်ပါ ဆိုသလို လူအများ သုံးစကား လှိမ့်ဝင် ဆိုတာကို ယူပြီး လှိမ့်ဝင် နေတဲ့ …အရုပ်ကလေး တွေ ကို စီရင်ပေးသွားတာပါ ။
အဲဒီမှာ စဉ့်အိုး လေး ကို လှိမ့်ဝင်နေတဲ့ ကောင်လေး( ၂ ၄ ) ပုံ လေးပါ ။ စဥ့်အိုးကို ဘာလို့သုံးလဲ . တစ်ခြားဟာတစ် ခု ခုကိုလည်း လှိမ့်ဝင် လို့ ရတာပဲ လို့ တွေးမိတော့ .. စဥ့်အိုး = ၃ ၁ ဆိုတာ အောင်စေ = အေးစေ = ၁ ၃ ကို ကက်က င်းရိုက်သွားတယ် ထင်ပါ တယ် ။
လှမ့်ဝင် = ၄ ၄ = ရွှေလာ = လူလာ = လိုရာ = ရလာ ဓါတ်ပေါ့.. လှိမ့်ဝင် ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတော့တည်သုံးလေ တစ်ရုပ်လုပ်သွားပါတယ်။ လှိမ့်ဝင်လာတဲ့ဟာတွေကို ဘုရားတည် ။ ကျောင်းတည် ။ ဇရပ် တည် ။ သာသနာ တည် နိုင်တဲ့ အထိ သုံး နိုင်ဖို့ လောကီဝိဇ္ဇာ အဘများက စီရင် သွားခဲ့တဲ့ ဓါတ်အရုပ်လေးတွေပါ ။ ဘယ်လို သုံးမလဲ ၊ ဘယ်လို ဆော င်မလဲ ဗျာ
၁။ သန ချေ ရပါတယ်။ အညံ့ခြေရပါတယ်။ ကိုယ့်စီးပွားအတွက် အထွဋ် အမြတ်ဆောင် မည့် ပစ္စည်းဟာ ကား နဲ့သ ယ်လားရင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကလေး လူကြီး ကျော်ခွသွားတာ မျိုး ၊ ကားထိုင်ခံအောက်ထဲထည့် သယ်လာတာမျိုး တွေရှိတတ်ပါတယ်။
အဲဒီလို အညံ့ဓါတ်တွေ ကင်းဖို့ ဆားရည် (ရေ ၁ ဂါလံ ကို ဆား ၂ ဇွန်းထည့်ပြီး)ကို ဇလုံထဲထည့်ပြီး လက်ဆယ် ချောင်း က ဆေးဖြစ်စေ ဆိုပြီး ၃ ခါ ပြောပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ဇလုံထဲထည့်ပြီး သနပ်ခါး သွေးသလို လက်ယာရစ် မွှေပြီး ပါးစပ် မှလည်း
““ ဥုမ် သန သန သန အပေါင်း ထောင်သောင်း ကြေစရာ ကြေ ””
ဆိုပြီး ၃၇ ခေါက် ရွတ်ပြီး မှ အဲဒီ အရုပ် များကို ၄င်းရေနဲ့ ဆေးပါ ။
ပြီးမှ ၄င်း အရုပ်များကို ရေမွှေး (န၀င်းရေ) ရည်နဲ့ ပက်ဖြန်းပြီးမှာ အိမ်ဘက် သို့ အိုးလှိမ့် ၀င်နေတဲ့ ပုံ အိုး ကို အိမ်ဘက် အတွင်းသို့ ထားပြီး အိမ်ရှေ့မှာ ထားလိုက်ပါ ။
တည်သုံး အိုး လေးကိုတော့ အလုပ်စားပွဲ ၊ အိပ်ခန်းစားပွဲ ၊ အိမ်ထဲမှာ ထားထားလိုက် ထူးထူးခြားခြား အဆင်ပြေလာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ ။။။
ဘယ်နေ့ ဘယ် အချိန်မှာ ဆောင် တင်ထားရမလဲ မိမိမွေးနေ့မနက် 9း45 မှာ တင် ဆောင်ထားပါ လေ ။ လူ မ ၀င်ေ သာ ဆိုင်များ တည်းခိုခန်းများ ဟိုတယ်များ လူများလှိမ့်ဝင်လာ ပါလိမ့်မယ် ။ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ငန်းများ သိသိသာ သာတိုးတက်လာ တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မည် ။
တစ်ပတ် လောက် လှိမ့်ဝင်နေပြီး နောက်ပိုင်းနည်းနည်း ပါးသွားတာ မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ လှိမ့်ဝင် အရုပ်ကလေး ကို မျက်နှာ သစ်ပေးလိုက်ပါ ။ ပြီးတော့ ရေမွှေးလေး ဖြန်ပေးလိုက်ပါ ။ ပြီးတော့ ““လာထား လာထား”” ဆိုပြီး လက်ခုတ် တီးပြီးပြော လိုက်ပါ ။
၀င်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာ .. ပထမဆုံး ၀င်သောငွေမှ အနည်းအကျင်းကို ဘုရားလှူ လိုက်ပါ ။ ပြီးမှ ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံကို သုံးပါလေ ။
၂။ ထမင်းစားလျှင် ဘေးမှာကျနေသာ အမှိုက်များကို ထမင်းစားပြီး လျှင် မိမိပန်းကန်ထဲသို့ ထည့်ပြီး ဆေးဖို့ မယူသွား ရပါ။
၃။ စားပြီး အိုးခွက်ပန်းကန်များကို မနက်မှ ဆေးတော့ပါမယ် ဆိုပြီး မီးဖို ချောင်ထဲမှာ မဆေးပဲ တစ်ညလုံး ပုံမထား သင့်ပါ ။
၄။ အိမ်ထောင်ဦး အမျိုးသား၏ အကျီး ၊ စွတ်ကျယ် ၊ တဘက် ၊ ပုဆိုး အဟောင်းများကို ကြမ်းသုတ် လက်သုတ် ဖုန်သု တ်မလုပ်ရပါ။
၅။ လင်မယားအချင်းချင်း ၉ နာရီ မကျော်မီ စောစောစီးစီး စကားများ ရန် မဖြစ်ရ။ မငြူစူးရ ၊ ဒေါသမဖြစ်ရပါ။ စောစော စီးစီး နိမိတ် မကောင်းသော အမင်္ဂလာ သီချင်းများ မဖွင့်ရပါ ။
အဲဒီ ၅ ချက် ၂ ချက်လောက် လုပ်မိလျှင် လာဒ်တိတ်ေ စတတ်ပါတယ်။ ငွေဝင်ပါလျှင်လည်း အသာလွတ် ပြန်ပြန်ထွက်သွားတတ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အဲဒီ အချက်များ ကို ရှောင်သင့်ပါသည်။ အားလုံး ငွေကြေး ရတနာများ လုပ်ငန်းကောင်းများ လှိမ့်ဝင်ကြပြီး အလှူ အတမ်း ၊ ဘာသာရေး ၊ သာသာနာရေး ။ ပရဟိတ အရေး အတွက် တည်သုံးနိုင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သ ရင်း ……….
အဲဒီလို အညံ့ဓါတျတှေ ကငျးဖို့ ဆားရညျ (ရေ ၁ ဂါလံ ကို ဆား ၂ ဇှနျးထညျ့ပွီး)ကို ဇလုံထဲထညျ့ပွီး လကျဆယျ ခြောငျး က ဆေးဖွဈစေ ဆိုပွီး ၃ ခါ ပွောပွီး လကျနှဈဖကျကို ဇလုံထဲထညျ့ပွီး သနပျခါး သှေးသလို လကျယာရဈ မှပွေီး ပါးစပျ မှလညျး ““ ဥုမျ သန သန သန အပေါငျး ထောငျသောငျး ကွစေရာ ကွေ ”” ဆိုပွီး ၃၇ ခေါကျ ရှတျပွီး မှ အဲဒီ အရုပျ မြားကို ၎င်းငျးရနေဲ့ ဆေးပါ ။
ပွီးမှ ၎င်းငျး အရုပျမြားကို ရမှေေး (နဝငျးရေ) ရညျနဲ့ ပကျဖွနျးပွီးမှာ အိမျဘကျ သို့ အိုးလှိမျ့ ဝငျနတေဲ့ ပုံ အိုး ကို အိမျဘကျ အတှငျးသို့ ထားပွီး အိမျရှမှေ့ာ ထားလိုကျပါ ။ တညျသုံး အိုး လေးကိုတော့ အလုပျစားပှဲ ၊ အိပျခနျးစားပှဲ ၊ အိမျထဲမှာ ထားထားလိုကျ ထူးထူးခွားခွား အဆငျပွလောတာကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ ခငျဗြာ ။။။
တဈပတျ လောကျ လှိမျ့ဝငျနပွေီး နောကျပိုငျးနညျးနညျး ပါးသှားတာ မြိုးဖွဈခဲ့ရငျတော့ လှိမျ့ဝငျ အရုပျကလေး ကို မကျြနှာ သဈပေးလိုကျပါ ။ ပွီးတော့ ရမှေေးလေး ဖွနျပေးလိုကျပါ ။ ပွီးတော့ ““လာထား လာထား”” ဆိုပွီး လကျခုတျ တီးပွီးပွော လိုကျပါ ။ ဝငျလာပါလိမျ့မယျဗြာ .. ပထမဆုံး ဝငျသောငှမှေ အနညျးအကငျြးကို ဘုရားလှူ လိုကျပါ ။ ပွီးမှ ကနျြတဲ့ ပိုကျဆံကို သုံးပါလေ ။
ထို့ကွောငျ့ အဲဒီ အခကျြမြား ကို ရှောငျသငျ့ပါသညျ။ အားလုံး ငှကွေေး ရတနာမြား လုပျငနျးကောငျးမြား လှိမျ့ဝငျကွပွီး အလှူ အတမျး ၊ ဘာသာရေး ၊ သာသာနာရေး ။ ပရဟိတ အရေး အတှကျ တညျသုံးနိုငျကွပါစေ လို့ ဆုတောငျး မတ်ေတာ ပို့သ ရငျး ……….
တန်ဖိုးရှိ အသုံးတည့်လွန်းလှတဲ့ ယင်ကောင်တွေကို အလွယ်ဆုံး ပြေးစေမယ့် နည်းလမ်း
PREVIOUS POST Previous post: သေချာဖတ်ကြည့်ပါ…သိုက်ကလာတဲ့ ကလေးများမဟုတ်ကြပါ။
NEXT POST Next post: အရင်က ကြားခဲ့ဖူးတာတွေ ယခုလက်တွေဖြစ်နေကုန်တဲ့ ဘေးအန္တရာယ် ကပ်ဆိုးတွေ